GAZZETTA: Cristiano Ronaldo waxaa lagu heli karaa €400m (CR7 oo la sheegay inuu ka tegayo Real Madridid) – Gool FM
GAZZETTA: Cristiano Ronaldo waxaa lagu heli karaa €400m (CR7 oo la sheegay inuu ka tegayo Real Madridid)
Raage June 16, 2017
(Milano) 16 Juunyo 2017 – Gazzetta dello Sport ayaa sheegaya in jookarka Real Madrid ee Cristiano Ronaldo uu kooxaha doonaya ugu kacaya lacag rikoodh jebis ah oo dhan €400m.
Warka ah inuu Ronie sheegay inuu ka tegayo Real Madrid ayay warbaahinta reer Portuguese hawada soo gelisey maanta oo Jimce ah iyagoo xitaa sheegaya in go’aanka Ronaldo uu yahay mid ”aan laga noqon karin” kaddib markii ay soo bexeen warar ku eedeeynaya inuu canshuuro lunsaday.
“Cristiano wuxuu go’aansaday inuusan dib ugu laabanin Spain maxaa yeelay wuxuu aaminsan yahay in si xun loola dhaqmin oo aan qofina difaacin,” ayuu weriyaha Nuno Luz, oo uu La Gazzetta soo xigayanayo inuu yahay nin arrintan aad wax uga qoray uu u sheegay Radio Marca.
Warkan ayaa waxaa markiiba ku raacay Marca iyo Sky Sports, balse tan ugu darani waxay tahay lacagta lagu heli karo adeegga laacibkan haddiiba uu ka tegayo Madrid wuxuuna warsidaha Talyaanigu sheegayaa inuu ku kici doono qiyaastii €400m marka la isu geeyo lacagta khidmadda ah iyo mushaharkiisa.
Paris Saint-Germain iyo naadigiisii hore ee Manchester United ayaa loo arkaa kuwa safka hore si dabiici ah ugu jira haddiiba uu tegeyo wiilkan lambar 7.
HAL BOOLI AH: Ninkii soo helay Donnarumma oo sheegay inuusan la yaabin dhaqanka gurracan ee laacibka!! (Akhri sheeko yaab leh oo dhacday sanado kahor)
Madaxweynihii hore ee Real: Qalbiga Ronaldo waxa uu yaalaa Manchester United